Siminaar kor loogu qaadayo aqoonta hooyooyinka oo laga furay Laascaanood.
Laascaanood,Somalia,18 MAR 2003- Waxaa lagu qabtay magaalada Laascaanood xaflad balaadhan oo ay ka soo qayb galeen dad aad u fara badan oo isugu jira aqoonyahano iyo masuuliyiinta gobolka,xafladaas oo ay soo qaban qaabiyeen dhowr hay,adood oo isu tegey iyo gudiga waxbarashada ee gobolka Sool,ayaa waxa loogu gogol xaadhayey siminaar kor loogu qaadayo aqoonta hooyooyinka gobolka Sool.
Xaflada furitaanka siminaarka haweenka oo aqoonyahamiinta ka soo qayb galay ay u badnaayeen haween,ayaa waxaa halkaas hadalo qiiro leh ka soo jeediyey Prof Faysal oo tusaaleeyey muhiimada ay leedahay in kor loo qaado aqoonta haweenka,maxaa yeelay buu yidhi hooyadu waa baraha ugu muhiimsan ee dhalaanka soo koraya.
Waxaa imtixaan laga qaaday 45 haween ah oo u tartamayey 20 jago oo u noqon doona macalimiin,20 fasal oo laga furi doono daafaha magaalada Laascaanood,fasal kastana waxaa wax lagu bari doonaa 60 haween ah.
Wararka kale ee ka imaanaya gobolka Sool ayaa waxay sheegayaan in ciidamada dawaawiishta ee Puntland ay gacanta ku dhigeen danbiilayaal kor u dhaafay 100 oo caadaystey inay dab qabadsiiyaan dhulka soolka ah ,kadibna ay dhuxusha iyo xaabada u dhoofiyaan wadamada carabta iyo magaalooyinka waaweyn ee soomaaliyaba,qiimaha dhuxusha ayaa cirka isku shareeray,iyadoo kiishka dhuxusha ah uu kor u dhaafay 150 kun magalada Boosaaso,halka uu magaalooyinka Laascaanood,Garoowe,Gaalkacyo uu kor u dhaafay 100 kun oo shilinka soomaaliga ah.Badanaa dadkii la qabqabtay waa la sii daayey.
Cabdillaahi Yuusuf Axmed iyo wafti uu hogaaminayo ayaa isna dib ugu soo laabtay wadanka isagoo ay u dhamaatay wakhtigii uu si sharci ah wadanka dibada uga maqnaan lahaa.